【 အနုပညာ 】သားအိမျအဝရောငျခွငျး (Endocervitis) | Opinion Leaders
【 အနုပညာ 】သားအိမျအဝရောငျခွငျး (Endocervitis)
ဒီအပတျမှာတော့ အမြိုးသမီးတှမှော အဖွဈမြားတဲ့ သားအိမျအဝရောငျခွငျး (Endocervitis) အကွောငျး ဖျောပွမှာပါ။
Endocervicitis ဆိုတာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ မှေးလမျးကွောငျး သားအိမျရဲ့အဝ (Cervix) ရောငျခွငျးကို ချေါတာပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ လိငျမှတဆငျ့ ကူးစကျတတျသော ပိုးမြားကွောငျ့ ဖွဈတာမြားပမေယျ့ အခွားအကွောငျးတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဂနိုးရီးယား (Gonorrhoea), Chlamydia, ရယေုနျပိုး (Herpes), Trichomonas စတဲ့ ပိုးတှကွေောငျ့ သားအိမျရောငျခွငျးဖွဈသညျ။ လိငျဆကျဆံရာမှတဆငျ့ ကူးစကျသညျ။
မှေးလမျးကွောငျး သနျ့စငျ ဆေးရညျတှေ၊ ရာသီလာစဥျသုံးသော ပစ်စညျးမြား၊ ကိုယျဝနျတားဖို့သုံးသော ဆေးမြား ပစ်စညျးမြား၊ အကာအကှယျ ကှနျဒုံးမှာပါတဲ့ latex နဲ့ ဓါတျမတညျ့တဲ့ သူတှမှောလညျး သားအိမျဝရောငျခွငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၃) မှေးလမျးကွောငျးတလြှောကျ သဘာဝအတိုငျးရှိနတေဲ့ normal flora လို့ချေါတဲ့ ဘကျတီးရီးယားလေးတှေ ပုံမှနျထကျပိုပေါကျပှားတဲ့အခါမှာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ (Bacterial vaginitis)
-အရငျက လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျတတျသောရောဂါ (STD) ဖွဈဖူးခွငျး
ဘယျလို လက်ခဏာတှနေဲ့ တှရေ့မလဲ?
- မှေးလမျးကွောငျးမှ အနံ့နံသောအရညျဆငျးခွငျး
-ဆီးပူ ဆီးကငျြခွငျး၊ ဆီးစပျအောငျ့ခွငျး
- ပုံမှနျရာသီလာခြိနျမဟုတျဘဲ သှေးဆငျးခွငျး
-လိငျဆကျဆံပွီးခြိနျတှငျ ပုံမှနျမဟုတျဘဲ သှေးဆငျးခွငျး
သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျမှ အောကျပိုငျးစမျးသပျခွငျး (Pelvic examination) ပွုလုပျမယျ။ Speculum လို့ချေါတဲ့ ကိရိယာနဲ့ မှေးလမျးကွောငျးတလြှောကျနဲ့ သားအိမျအဝမှာ ရောငျရမျးတဲ့ လက်ခဏာရှိ မရှိ စဈဆေးမယျ။ ဒါ့အပွငျ Pap smear လို့ချေါတဲ့ သားအိမျခေါငျးကငျဆာရှိ မရှိ ပါ စဈဆေးဖို့လိုမှာပါ။
မြားသောအားဖွငျ့ လိငျမှတဆငျ့ ကူးစစကျတဲ့ ပိုးတှကွေောငျ့ ဖွဈတာမို့ ထိရောကျတဲ့ ပိုးသတျ ဆေးပေးရငျ ပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။ ဂနိုးရီးယားကွောငျ့ ဖွဈရငျတော့ Cephalosporins အုပျစုဖွဈတဲ့ Ceftriazone ကို အသားဆေးပေးနိုငျတယျ။ Cephalosporin allergy ရှိရငျတော့ Ciprofloxacin or Azithromycin သောကျဆေးပေးနိုငျတယျ။ Chlamydia ပိုးကွောငျ့ ဖွဈရငျ တော့ Doxycycline သို့မဟုတျ Azithromycin သောကျဆေးနဲ့ ကုနိုငျပါတယျ။ ရယေုနျပိုး အတှကျတော့ Acyclovir ပေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ Sexual partner (လိငျဆကျဆံဖျော) ကိုလညျး ကုဖို့လိုပါတယျ။ ပိုးသတျဆေးသောကျနစေဥျ လိငျဆကျဆံခွငျး ရှောငျရမှာပါ။
သန်ဓတေားဆေးတှေ ပစ်စညျးတှေ ကှနျဒုံးနဲ့ မိနျးမကိုယျ သနျ့စငျဆေးရညျတှနေဲ့ ဓါတျမတညျ့တာ အတှကျတော့ ပိုးသတျဆေးပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ဓါတျမတညျ့တာတှေ ရှောငျလိုကျရငျ သကျသာ သှားမှာပါ။
မကုရငျ နောကျဆကျတှဲ ဘာဖွဈနိုငျလဲ?
သားအိမျဝရောငျရာကနေ ပိုးက သားအိမျတှငျးထိရောကျပွီး အဲ့ကတဆငျ့ PID လို့ချေါတဲ့ တငျပဆုံတှငျး အဂျေါတှရေောငျခွငျးဖွဈနိုငျတယျ။ ကလေးရဖို့ ခကျခဲခွငျး၊ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျး၊ သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျး စတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
မဖွဈအောငျ ဘယျလို ကာကှယျမလဲ?
လိငျဆကျဆံတိုငျး အကာအကှယျ ကှနျဒုံးသုံးခွငျးဖွငျ့ လိငျမှတဆငျ့ကူးစကျတတျသော ရောဂါ တှကေို ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
ဒီအပတ်မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း (Endocervitis) အကြောင်း ဖော်ပြမှာပါ။
Endocervicitis ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း သားအိမ်ရဲ့အဝ (Cervix) ရောင်ခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ များသောအားဖြင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ပိုးများကြောင့် ဖြစ်တာများပေမယ့် အခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂနိုးရီးယား (Gonorrhoea), Chlamydia, ရေယုန်ပိုး (Herpes), Trichomonas စတဲ့ ပိုးတွေကြောင့် သားအိမ်ရောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံရာမှတဆင့် ကူးစက်သည်။
မွေးလမ်းကြောင်း သန့်စင် ဆေးရည်တွေ၊ ရာသီလာစဉ်သုံးသော ပစ္စည်းများ၊ ကိုယ်ဝန်တားဖို့သုံးသော ဆေးများ ပစ္စည်းများ၊ အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးမှာပါတဲ့ latex နဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ သူတွေမှာလည်း သားအိမ်ဝရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) မွေးလမ်းကြောင်းတလျှောက် သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ normal flora လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားလေးတွေ ပုံမှန်ထက်ပိုပေါက်ပွားတဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (Bacterial vaginitis)
-အရင်က လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါ (STD) ဖြစ်ဖူးခြင်း
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမလဲ?
- မွေးလမ်းကြောင်းမှ အနံ့နံသောအရည်ဆင်းခြင်း
-ဆီးပူ ဆီးကျင်ခြင်း၊ ဆီးစပ်အောင့်ခြင်း
- ပုံမှန်ရာသီလာချိန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းခြင်း
-လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းခြင်း
သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်မှ အောက်ပိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း (Pelvic examination) ပြုလုပ်မယ်။ Speculum လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာနဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းတလျှောက်နဲ့ သားအိမ်အဝမှာ ရောင်ရမ်းတဲ့ လက္ခဏာရှိ မရှိ စစ်ဆေးမယ်။ ဒါ့အပြင် Pap smear လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိ မရှိ ပါ စစ်ဆေးဖို့လိုမှာပါ။
များသောအားဖြင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစစက်တဲ့ ပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်တာမို့ ထိရောက်တဲ့ ပိုးသတ် ဆေးပေးရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဂနိုးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ရင်တော့ Cephalosporins အုပ်စုဖြစ်တဲ့ Ceftriazone ကို အသားဆေးပေးနိုင်တယ်။ Cephalosporin allergy ရှိရင်တော့ Ciprofloxacin or Azithromycin သောက်ဆေးပေးနိုင်တယ်။ Chlamydia ပိုးကြောင့် ဖြစ်ရင် တော့ Doxycycline သို့မဟုတ် Azithromycin သောက်ဆေးနဲ့ ကုနိုင်ပါတယ်။ ရေယုန်ပိုး အတွက်တော့ Acyclovir ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Sexual partner (လိင်ဆက်ဆံဖော်) ကိုလည်း ကုဖို့လိုပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးသောက်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း ရှောင်ရမှာပါ။
သန္ဓေတားဆေးတွေ ပစ္စည်းတွေ ကွန်ဒုံးနဲ့ မိန်းမကိုယ် သန့်စင်ဆေးရည်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ အတွက်တော့ ပိုးသတ်ဆေးပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ဓါတ်မတည့်တာတွေ ရှောင်လိုက်ရင် သက်သာ သွားမှာပါ။
မကုရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?
သားအိမ်ဝရောင်ရာကနေ ပိုးက သားအိမ်တွင်းထိရောက်ပြီး အဲ့ကတဆင့် PID လို့ခေါ်တဲ့ တင်ပဆုံတွင်း အဂေါ်တွေရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးရဖို့ ခက်ခဲခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ?
လိင်ဆက်ဆံတိုင်း အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဖြင့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါ တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။